IITATTOOS EZINCINCI EZILULA EZINGAMA-63 ZAMADODA [ISIKHOKELO SOKUPHEFUMLELWA SAMA-2021] - UHLOBO
Iitattoos ezincinci ezilula ezingama-63 zaMadoda- [2021 Isikhokelo sokuphefumlela]
Nabani na ofumana itattoo okokuqala, kunokuba ngamava amnandi. Inyani yile, ayifanelanga ukuba njalo. Ngokuqala kancinci kwaye uhambe noyilo olulula, uya kuyicotha kancinci indlela yakho kubugcisa bomzimba,kunokwenzeka ngenye yeefayile ze- Iingcamango ezilungileyo ze tattoo ze-2020.
Ngelixa iifayile ze intlungu yokufumana itattoo inokuba yeyethutyana, i-inki kulusu lwakho ngokuqinisekileyo isigxina.
Wonke umntu uyakwazi oku, ukanti uninzi lwabantu lusoloko lucinga ukuba lukhulu xa kufikwa kumvambo wabo wokuqala.
Ngaba likhulu ilungelo elilungileyo? Hayi kanye.
Inyani yile, iitattoos ezincinci ezincinci kunye noyilo olulula zinokubonakala zilungile.
Kukho izimvo ezingenakubalwa zoyilo oza kuhamba nazo ukusuka iiankile kwiintaba, imithi nokunye. Nokuba ubume bekhamera bunokuba nentsingiselo ebalulekileyo kumfoti wobomi bonke.
Ukukunceda ukuba ube nobuchule bokuyila, sidibanise ingqokelela yeetattoos ezincinci ezincinci ezingama-63. Ukulula kwabo kunye nendalo engenabunzima yenza inkuthazo enkulu. Ungavumeli ubungakanani bazo bukukhohlise, iintsingiselo ezisemva kwenye inokuba nzulu kakhulu!
Bona ngakumbi malunga - Phezulu Iitattoos ezilula ezingama-96 +
1. Iingcamango zeTattoo ezincinci zeJometri
Le ilula kodwa iyasebenza I tattoo yejometri . Ngumtsalane onobuchule, umgca omnye obuya kuthabatha iliso elilungileyo ukwandisa ii-angles ezibukhali
Enye indlela entsha, ecocekileyo, yejiyometri. Ulungelelwaniso lwesi siqwenga sima ngaphandle, kunye neenkwenkwezi ezingeneyo embindini ziyinxalenye ephambili yomsebenzi wobugcisa- kulula ngokukuko kubonisa ubunzima obupheleleyo obude uthathe ixesha elide.
Imibono yetayile kunye nethayile yeshawari
Le armadillo encinci encinci epholileyo. Yisiqwenga esahlukileyo esinqabileyo esisebenzisa imilo yaso kunye nenxalenye engabhalwanga kumvambo wejiyometri ukwenza isikrweqe sivale kunye.
Umnyama omnyama ukusuka kwinaliti ebanzi yokulinganisa yenza unxantathu obalaseleyo. Umthi apha utsaliwe ngobuchule, usebenzisa imigca kumaza kunokufaka umthunzi kunye nesithunzi. Lo mfanekiso uya usiba nzulu ngokuya uwujonga ixesha elide.
Olu luvo olulula, kodwa luchanekile xa kusenziwa, nge-bevy yoonxantathu ebekwe phantsi kusetyenziswa igeji emxinwa. Ukutsha komsebenzi kukhokelela kwipateni enkulu yolungelelwaniso.
Le tattoo ngokuqinisekileyo iya kuba kwisiphelo esiphezulu sexabiso le tattoo encinci. Iidotwork tattoos Zidla ixesha elininzi kunye neziqwenga zobugcisa, kodwa zinika umfanekiso onomdla ngokuchaseneyo nokufiphaza rhoqo okanye ukusetyenziswa kwepateni.
2. Iingcamango ezincinci zeTattoo eziMnyama ezilula kunye neGrey
Iqhekeza eliqaqambileyo elipakisha izinto zetattoo enkulu kubungakanani obuncinci. Kukho amanqanaba amathathu ahlukeneyo-ilanga kunye nefu-chute eyenziwe ngumthunzi ogqwesileyo, emva koko imigca yentambo ekrwada ngokwabo ejoyina i-jumper, ephantse yajongeka njengomntu we-origami. Umsebenzi wedrowa ephezulu!
Iintsiba luhlobo oludumileyo lwe tattoo encinci. Bakhulu kakhulu ekubeni bekwazi ukuhambisa i-skillset yamagcisa, ngakumbi ukwenza umthunzi kunye nomsebenzi womgca.
I-Biomechanics idibana nezinto eziyinyani. Ukusetyenziswa ngempumelelo kwe-shading ukuqaqambisa ukunqongophala kwe tattoo kwiindawo kunye nokwenza iinkcukacha ezenza ukuba isiqwenga sivelise. Yinto engenasiphako kodwa yoyilo isikhumbuza ii-knucklebones zentsimbi.
3. Iingcamango ezincinci zeTattoo
Inqwelomoya yephepha ihambelana nomxholo we tattoo encinci umyalezo. Incinci, ilula, kodwa ichongeke lula sisiqwenga esihle, esahlukileyo.
Le ibonakala ngokungaphezulu, i ilayini elula eluhlaza okwesibhakabhaka amaza athelekisa nomnyama / ngwevu wokugqibela kukakrebe ukwenza umfanekiso mhle, omncinci.
Kwimizobo yeentaba esiyijongileyo apha yile yeyona nto incinci, enemigca embalwa elula edityaniswe kunye ukwenza uluhlu
Lo mthi umncinci usekupheleni kwembonakalo. Ilula kodwa iyasebenza, usebenzisa inaliti enye kwaye umsebenzi ngewugqityiwe ngemizuzu.
Isuntswana elincinci le-inki elincinci. Ingathetha nantoni na, okanye akukho nto. Kodwa imigca ibukhali, izotywe kakuhle, kwaye ibekwe ngokuchanekileyo kwingalo yangaphambili. Ngokuqinisekileyo iqalisa incoko.
Ungasokola ukufumana umzekelo ongcono wendlela encinci, igagasi elinye elililolo. Oku kuya kuba yimizuzu emi-5 yomsebenzi kwaye kunokwenzeka ukuba ibe phantsi kwevenkile yamaxabiso amaxabiso asezantsi, ngaphandle kokuba banentengiso yosuku lweflash okanye ukunyuswa.
Iitattoo ezingaqhelekanga zinokubetha kancinci kwaye ziphoswe, kodwa ubomi bomug yeyona ndlela ilungileyo, nokuba yintoni ekwindebe yakho!
4. Iingcamango ezincinci zeTattoo zeNdalo
Le yitattoo encinci enobukrelekrele kakhulu, edlala imibala eqinileyo eblowu-mnyama ngokuchasene ne-shading ephantse yenziwe ukwenza uthotho lweencopho, ezinemigca ecocekileyo exhasa utshintsho kwimilo.
Esi siqwenga yenye into encinci enomdla. Ngokunika umfanekiso umda, igcisa lisebenze ngaphakathi kwezithintelo zalo ukwenza indawo entle yokwenyani, kunye ne-shading ehlakaniphileyo enceda ukudala iinkalo ezahlukeneyo zomhlaba, ihlathi, kunye neentaba, kunye nomsebenzi wokutshintsha umgca onika umlambo.
Ukuvalwa kwe tattoo kumkhono wesiqingatha
5. Iingcamango ezincinci zeTattoo
Le tattoo incinci inezinto zesitayile somzobo odityaniswe nobuchule bejiyometri ukwenza iqela elihle leentaba, kunye nemigca eyedwa ngasentla nangaphantsi kwenkxaso yeqhekeza kakuhle ngaphandle kokwenza okuninzi.
6. Iingcamango ezincinci zeTattoo Linework Linework
I-emoji yomlilo. Le yi-badass itattoo yesiko laseMelika . Ngumzekelo omhle wemigca ecocekileyo, emnyama, kunye nesiqwenga somsebenzi wenaliti ngumculi. Olu luhlobo lweqhekeza ukubonisa iimvakalelo zakho zesikolo esidala.
Le iyahlekisa. Kuyafana nomceli mngeni ekuya kufuneka uwenzile ngokuvala amehlo akho kunye nokuzama ukuzoba ubuso bomntu ngaphandle kokususa iliso kwiphepha. I-tattooist mhlawumbi ayenzanga loo nto, kodwa icocekile kakhulu umgca oqhubekayo .
7. Iingcamango ezincinci zeTolo ezilula
Ngamanye amaxesha ezona tattoos zilula zezona zibambisa kakhulu. Esi siqwenga sincinci sikhumbuza iitotto zesikolo esidala. Amasiko amandulo njengamaScythians, iiPikt, kunye namaThracian ayenoluhlobo lwendlela ye tattoo, ahlala efumana inki ebudodeni nakwizithethe zemfazwe.
Intsingiselo epholileyo etolo, yitattoo eyothusayo ikakhulu ngenxa yobude bayo. Utolo luthe nkqo, abamnyama babukhali imigca, kunye nomfanekiso okhululekileyo wokufiphaza uyenza iphumle kakuhle ingalo engaphakathi.
8. Iingcamango ezincinci ze-Nautical Themed Tattoo
Oku kutsalwe kakuhle. Isikali esincinci sesi siqwenga songeza ubumnandi kwindawo efanelekileyo yokuzikhusela. Kukho ubunzulu obukhulu emfanekisweni, kunye nezinto zomgca kunye nokusebenza kwe-shading kusebenza kakuhle.
Ukuya kwi-20thoomatiloshe benkulungwane ibingoyena msebenzi ubalulekileyo wokufumana iitatoo, ngakumbi oomatiloshe abahamba umgama omde bethutha iimpahla. Ezi ntsuku ii-ankile ezifana nale ziyabhalwa ngakumbi kunqulo, kunokuba zibekwe njengomgangatho wobungcali. Olu luhlobo olukhohlisayo lomsebenzi omnyama.
9. Iingcamango ezincinci zeThattoo ezimnyama zeBold emnyama
Azikho iitatoos ezininzi zikaNessie, kodwa le ipholile. Igongqongqo elimnyama eliqinileyo lithelekisa nomsebenzi womgca osetyenziselwa ukwenza isithunzi emanzini.
I-calligraphy yaseJapan kunzima ukuyikhupha kodwa le nguqulo iyagqwesa. Ibonakalisa ngokwenyani ubugcisa bemveli baseJapan kwaye ijongeka ngathi ibinokutsalwa ngokutsha nge-quill esikiweyo kunye ne-inki entsha. Oku kungaphantsi komgangatho wobugcisa obugqithisileyo.
Esi siqwenga ngumzekelo obalaseleyo wesitayile esimnyama. Akukho shading, inaliti enye, kodwa inikezelwe ngokucacileyo ngenxa yobume obukhulu obuzaliswe kakuhle sisikhundla sehlungulu ngaphaya kweembambo zakhe.
Kunzima ukuchaza umnyama njengombala ocacileyo kodwa le calligraphy yaseJapan iphantse yenze ukuba isiqwenga sibukeke siyinyani. Ihanjiswe kakuhle ngokwaneleyo ukuba ikholelwe ukuba ibinokupeyintwa yinkosi enebrashi yepeyinti yehashe.
Oku kuqinile, iqhekeza elincinci lesifuba ihambisa iphethini efanayo. Isebenzisa umxholo weRuneord ukwenza isimbo sayo. Kuya kuba ngumdla ukubona ukuba isiqwenga siguqulela ntoni na.
Umyalezo omncinci omnandi kwibhotile udlala kwizinto zemveli ukudala imeko yolwandle. Ngelixa incinci kuphela isebenzisa ukufiphaza okuhlakaniphile, kunye nemigca ebukhali yokwenza umfanekiso oqinileyo.
Oku kuthatha ngokungathandabuzekiyo kwi-tattoo entsha yomtshangatshangiso. I-noose inemisebenzi emikhulu yomgca ophuma ngokwenene kulusu, egcwaliswe ngumqondiso wefonti ocacileyo - iphantse yafana nomqondiso oqaqambileyo we-neon kwindawo engaphambi kwevenkile, kodwa iyabhabha.
Incinci Ixabiso le tattoo Unokuqala ukusuka kwivenkile ubuncinci be- $ 50- $ 80 yoyilo oluncinci- i-intshi ezimbini zesikwere okanye ngaphantsi, ukuya kuthi ga kwi-200 yeedola ngeyure yomsebenzi onzima ngakumbi.
Abanezakhono eziphezulu, kwimfuno yamagcisa anokuhlawulisa ukuya kuthi ga kwi-500 yeedola ngeyure, ngelixa abafundi abafundela umsebenzi kunye nabaculi abanobuchule abangaphantsi kwe- $ 75.00 ngeyure.
Bona ngakumbi malunga - Ezona ziPhambili zi-135 zeTattoo zeNgcono kuMadoda
Ixabisa malini itattoo encinci yesifuba?
Iitattoos zesifuba zibalwa ngexabiso ukusuka kwi- $ 400 nge-inki encinci, ngelixa iziqwenga zesifuba ezinzima zinokubiza imali engange- $ 2000. Kwakhona, inqanaba lesakhono kunye nebango lomculi wakho liya kuxela ixabiso.
Kuzo zombini iimeko i-15% yencam ngumndilili, kodwa i-20% yomsebenzi wobunjani ihlala icetyiswa.
imibuzo enzulu yokubuza intombazana
Izimvo zomama kumvambo wentombi
iiTattoo ezincinane zabafana
Isifuba sigubungela imibono ye tattoo
ekuthandeni iitatoo zememori kutata
Iimbono ze tattoo kubahlobo abasenyongweni